Maxamed Elneny oo FARIIN u soo diray Wiilkii ay ka Oohisay Arsenal, Balse Dhaleeceyn xoogan la kulmay – Gool FM
Maxamed Elneny oo FARIIN u soo diray Wiilkii ay ka Oohisay Arsenal, Balse Dhaleeceyn xoogan la kulmay
Byare February 26, 2018
(London) 26 Feb 2018. Laacibka Muslimka ah ee kooxda Arsenal Maxamed Elneny ayaa fariin Damqasho leh u soo diray wiilkii Arsenal darteed u OOYAY ciyaartii habeen hore ay guul darrada 3-0 kala kulameen Manchester City finalka Carabao Cup.
Balse xiddiga qadka dhexe ee reer Masar ayaa dhaleeceyn xoogan kala kulmay taageerayaasha oo ku soo weeraray Baraha Blushada.
“Dhageyso, Ilintaadu aad ayay qaali noogu tahay dhammaanteen, adiga dartaa iyo dhammaan taageerayaasha Arsenal, waxaan kuu balan qaadayaa inaan ku dagaalami doono sidii aad u dhoola caddeyn lahayd.” Maxamed ayaa sidaa ku soo qoray bartiisa Twitter ka.
Taageerayaal careysan ayaa durba u soo jawaabay oo dhaleeceyn dusha kaga tuuray.
Midbaa soo qoray: “Uma baahnin balan qaadkaaga ee iska tag.”.
Ku kalaa soo qoray: “Dhageyso Maxamed, Tani waa wax la jeclaysto, balse Taageerayaasha Arsenal waxay u baahan yihiin in garoonka lagu hadlo ee ma ahan baraha bulshada.
“Haddii aad kala bar xitaa ugu fiicnaan lahayd garoonka sida aad ugu fiican tahay Twitter ka, waxaad ku tartmi lahayd horyaalka iyo Champions League.”.
''Annaga xitaa ma filaynin in uu Gattuso saamayntan yeelan doono'' - Marco Fassone
HORDHAC: Espanyol vs Real Madrid